Tixgelinno ku saabsan Dhismaha Vs Iibsiga MarTech | Martech Zone
Su’aasha ah in la dhiso ama la iibsado softiweer waa dood dheer oo socotey oo u dhaxeysa khuburo fikrado kala duwan ka qaba internetka. Ikhtiyaarka aad ku dhisi karto softiweerka gurigaaga ah ama aad ku iibsan karto xalka diyaar garowga suuqa ee wali la diyaarinayo ayaa wali jahwareer ku haya dad badan oo go'aan qaadanaya Iyada oo suuqa SaaS uu ku soo kordhayo sharaftiisa buuxda halkaasoo qiyaasta suuqa lagu qiyaasayo inuu gaaro USD 307.3 bilyan markay tahay 2026, waxay u fududeyneysaa sumadaha inay iska diiwaan geliyaan adeegyada iyagoon u baahnayn inay dayactiraan qalabka ama ilaha kale.
Kahor intaanan toos u dhex galin dooda dhismaha iyo iibsiga, aan baarno sida habdhaqanka macaamiisha iyo waddooyinka wax iibsigu u soo mareen kacaan sidoo kale.
Kacaanka dijitaalka ah wuxuu leeyahay macaamiil hubaysan oo wata taleefannada casriga ah, kiniinno iyo adeegsadayaasha maanta ayaa dalbanaya oo filanaya adeeg, taas oo qaabaynaysa wax soo saarka alaabada ay cunaan. Way dhammaadeen maalmihii magacyadu ay sheegayeen oo ay saameyn ku yeelanayeen rajooyinka macaamiisha. In kasta oo xulashada-daalka iyo kelitalisnimada xulashooyinka ay saameyn ku yeesheen geeddi-socodka go'aan qaadashada, mishiinnada isbarbardhiga qiimaha, oo ay weheliso codadka Hoggaamiyeyaasha Fikradaha Muhiimka ah (KOLs) iyo saamileyaasha, ayaa ka caawinaya dadka isticmaala inay iibsadaan xog-ogaalnimo.
Dariiqa Iibsiga Casriga ah
Isbeddelka dhaqdhaqaaqa firfircoonida ee u dhexeeya macaamiisha iyo noocyada ayaa dib u habeeyay dariiqa iibsiga dhaqanka. Jidka casriga ah ee iibsiga, oo ay wadaan horumarka tikniyoolajiyadda iyo ilo badan oo macluumaad ah, ayaa alaabooyinka ka soo qaaday khaanadaha dukaanka oo ku ridaya nidaamka deegaanka ee dhijitaalka ah, kana gudbinaya caqabadaha juquraafi ahaaneed si ay u sameeyaan macaamil ganacsi aan dhib lahayn oo dareen leh.
Source: Tilmaamaha Iibsadaha MoEngage ee Ka Qaybgalka Macaamiisha
Sawirka kor ku xusan wuxuu muujinayaa sida wareegga safarka macaamilku u soo maray isbeddel ballaadhan oo muuqaal ah, mid beddelay xiriirka macaamiisha iyo astaanta macaamiisha ka timid keenista baahida loo waday.
Iyadoo la tixgelinayo qodobbada kor ku xusan ee ku saabsan sida noocyadu u higsanayaan inay noqdaan macaamiil badan oo ka tirsan howlahooda, waxaa sii kordheysa muhiimadda wax ka qabashada dhismaha iyo iibsiga dhibaatada. Laakiin taasi maahan mid toos ah. Ka hor intaadan go'aansan haddii ay kafiican tahay in laga dhiso barxad lagasoo bilaabo ama aad hesho tikniyoolajiyad jirta, halkan waxaa ku yaal dhowr arrimood oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso:
Kharashka ku baxa dhismaha ama wax iibsiga: Dhisida wax meel kasoo bilaabaya waxay noqoneysaa mid aad u weyn iyadoo kuxiran cabirka kooxda / shirkada waxaadna u baahan doontaa inaad xisaabiso saacadaha nin, kaabayaasha dhaqaalaha, iyo kharashka dayactirka, kuwaas oo dhamaantood ay adagtahay in si sax ah loo qiyaaso. Dhanka kale iibsashada xalka si loogu daboolo baahiyaha kala duwan ee kooxda dhexdeeda, mid ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu tixgeliyo khidmadaha liisanka kuwaas oo ku kala duwan tirooyinka isticmaalaha firfircoon iyo adeegyada la isticmaalay.
Wehelinaya halista intaad wax iibsanaysid ama aad dhisaysid: Khataraha ugu waaweyn ee ku lug leh iibsigu waa xakameyn xadidan iyo marin u helida softiweerka, koodhka isha, iyo cayayaanka, dhanka kale iyadoo la dhisayo xalka halista ugu weyn waxay ku jirtaa awooda ay u leeyihiin kooxda horumarinta taasoo keeni karta qarash kordhin.
Dhibaatada waxaa lagu xaliyaa xalka: Xikmad ma aha in la maro dhibaatada dhismaha wax ku takhasusay xoqida haddii aysan si toos ah ugu darin khadkaaga hoose. Badanaa waxaa lagula talinayaa inaad iibsato walxaha shirkad kasta oo ay u baahan tahay oo la dhiso waxa adiga ku kala duwan.
Rikoorka kooxda horumarka: Cabir xirfadaha kooxdaada horumarinta iyo biseylka xagga karti, firfircoonaan, iyo karti waxqabad. Haddii ay qiyaasaan illaa heer wanaagsan, markaa dhismaha softiweerka guriga dhexdiisa ayaa macno badan samaynaya marka loo eego iibsashada xalka suuqa u diyaarsan.
Kheyraadka aad ka heli karto gacantaada: Miisaaniyaddu waa qodob go'aan qaadasho weyn marka ay timaado iibsiga iyo dhisidda doodda. Xadka xadidan ee qarash gareynta noocyada kaladuwan, wuxuu siinayaa dhisida softiweerka raaxo badan. Shirkadaha haysta miisaaniyad xadidan, iibsashada xalka ayaa ah hab fudud oo wax looga qaban karo tan.
Waqtiga-suuqa looga baahan yahay: Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee tixgelinta la siinayo ayaa ah iibsashada xalka waa istiraatiijiyad aad u dhaqso badan oo suuqa tag ah maadaama lagu bixin karo sideed ilaa lix iyo toban toddobaad gudahood (iyadoo kuxiran kakanaanta kiisaska isticmaalka) marka loo eego bilaha ama sannadaha ay awooddo qaado si aad u dhisto madal guriga dhexdiisa ah.
Ahmiyadaha ganacsigaaga: Haddii aad gudahaaga ku dhisto xalkaaga, miyey mudnaan siinaysaa ganacsigaaga? Malaha maya, taas oo u horseedi karta inay noqoto mid horjoogsata horumarka haddii shirkaddaadu aysan sii wadi karin maalgashiga. Teknoolojiyaddu waxay ku jirtaa wareeg joogto ah oo isbeddel ah, maahan mashruuc hal-iyo-laqabto. Shirkad horumarisa xalka aad iibsan karto waxay ku tiirsan tahay xalkaas oo sii kobcaya isla markaana sii wadaya inay qiimo siiso macaamiisheeda.
Mid waa inuu iska ilaaliyaa waqtiga inuu ku lumiyo dhisida iyo abuurista wax horeyba si fiican loogu dhisay suuqa. Ujeeddada ugu dambeysa ee magacyadu waa in la siiyo macmiilka waayo-aragnimada ugu fiican ee fasalka iyo haddii taasi ay ku socoto teknoolojiyad horey u jirtay, ma habboon tahay in qofku runtii waqti badan ku qaato iyo dhisidda tamarta xalka?
Ujeedada ugu muhiimsan ee shirkadaha waxay noqon kartaa inay culeyska saaraan khibrada shidaalka ee aadanaha ee ay ka bixiyaan goob kasta oo taabashada dadka isticmaala iyo inay horumariyaan kaalmadooda iyo adeegyadooda. Farqiga sii ballaaranaya ee u dhexeeya rajooyinka macaamilka iyo awoodda summaddu u leedahay inay fuliso waa mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee maareeyayaasha casriga ahi higsanayaan inay xalliyaan. Si loo fahmo sida rajooyinka macmiilku isu beddeleen, waxaa muhiim ah in la ogaado isbeddelada ku yimaada dhaqdhaqaaqa isticmaalaha iyo dabeecadaha ay weheliyaan sida ay u saameynayaan go'aamada wax iibsiga.
Tags: xiriirka calaamadahadhis ka hor iibsodhiso vs iibsoSafarka macaamiishanolosha macaamiishahorumarintatikniyoolajiyadda soo baxdaGudahatikniyoolajiyadda suuqgeyntahalgankatikniyoolajiyad duug ahtikniyoolajiyad dhacsanwadada iibsigaTechnology
Smarketing: Iswaafajinta Kooxahaaga Iibinta & Suuqgeynta B2B
mParticle: Ururi oo ku Xidh Macluumaadka Macaamiisha adoo adeegsanaya Hubi APIs iyo SDKs